Indawo entle yeendwendwe ezingama-72 m² "Beim Schreiner" - I-Airbnb
Indawo entle yeendwendwe ezingama-72 m² "Beim Schreiner"
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguTorsten
“Kwingcibi yokwakha”? Ulibale ucalucalulo lwakho kwaye ucinge nge-oasis endaweni yoko. Kuba yeyona nto ilungileyo. Akukho bamelwane kwaye undwendwe lwakho luhlala lukhona - ngeengcebiso kunye nolwazi. Ngaphandle kwendawo ezolileyo, ngakumbi emva komsebenzi, awukhe wedwa. Ngenxa yendawo engaphandle, ukusondela kwindawo yorhwebo kuyafana nokusondela kwindalo. Usenokuzifumana apha: isanti lizard, gierlitz kunye neprimrose yangokuhlwa. Senza okuninzi ukuze siphile ngokwemvelo kangangoko sinako.
Indlu yeendwendwe yi-ofisi yangaphambili kunye negumbi loncedo, esithe sayiguqula kakhulu sayihlaziya. Indlu iyaqaqamba kwaye ipholile ehlotyeni kuba i-balcony ifihla iifestile ezijonge emazantsi. Ngokubhekiselele kwimpahla, ifenitshala ye-chipboard yayigwenywe kakhulu (ngaphandle kwendawo yekhitshi). Imigangatho ayinamphunga oyingozi. Igumbi lokulala liyakwamkela ngokukodwa ngevumba le-teak eqinileyo.
Iindwendwe zinokwahlukana kwaye zichithe ubusuku bazo ngokwahlukeneyo kumagumbi ama-2. Ukongeza, omabini amagumbi anokufikelela kwawo kwigumbi lokuhlambela. Iibhedi, nangona kunjalo, ziibhedi eziphindwe kabini.
Le ndlu yayiyindlu engatshaywayo.
Ewe, sihlala apha kumda wepaki yemizi mveliso "eneshishini elithe cwaka". Siyinandipha ngokukhethekileyo emva komsebenzi nangeempela-veki. Kanye xa sifuna ukuphumla, sikufumana ngokuyintabalala.
Ukongeza, indlela yokusebenza kwinkampani yakho ayinakoyiswa.
Umbuki zindwendwe ngu- Torsten
Ukubuza? Ngokukhethwa ngokuthe ngqo phantsi:
0049 152 02107692